के कारणले आउँछ अनुहारमा डंडीफोर ? यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ – Jagaran Nepal
के कारणले आउँछ अनुहारमा डंडीफोर ? यसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ
काठमाडौँ । धेरै युवायुवतीहरु डन्डीफोरको समस्याले पीडित हुने गरेका छन्। डन्डीफोर छालामा हुने एक प्रकारको रोग हो भन्ने कुरा नबुझ्दा र डन्डीफोर निको पार्ने भन्दै विभिन्न घरेलु उपाय अपनाउँदा धेरैले अनुहारको सुन्दरता गुमाउँछन्।
डन्डीफोरका चारवटा तह हुन्छन्।
अनुहार, छाती, कुम र कहिलेकाहीँ ढाडमा पनि डन्डीफोर आउँछन्। कपडाले ढाक्ने भागमा डन्डीफोर आउँदा खासै फरक पर्दैन। तर, अनुहारमा डन्डीफोरले दाग, धब्बा र स–साना खाल्टा छोडेर जाने भएकाले यो धेरैको पिरलोको बिसय बन्ने गरेको छ।डन्डीफोर धेरै चिल्लो छालामा देखिने रोग हो। यसबाट जोगिनको लागि छालालाई ड्राई राख्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।
जीवनशैलीमा ध्यान दिनुपर्छ। धेरै चिल्लो खानु हुँदैन। चकलेट धेरै खानेहरूलाई पनि डन्डीफोरको समस्या देखिन सक्छ। डन्डीफोर आएकाले तेलबाट जोगिनुपर्छ। कपालमा तेल हालेर बस्ने गर्नु हुँदैन। अनुहारको चिल्लो हटाउन क्लिन्जिङ गर्नुपर्छ। दिनमा तीनचारपटक मुख धुनुपर्छ। छालालाई सुक्खा बनाउने क्रिम लगाउनुपर्छ। डन्डीफोरले निकै नै दुःख दिएको छ भने एन्टिबायोटिक क्रिम लगाउने र औषधि समेत खानुपर्ने पनि हुन्छ ।
केही दिनमै अनुहार चम्काउन चाहनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी ६ मध्ये कुनै १ तरिका
यसरी बनाउनुहोस आफ्नै घरमा भिन्डीको स्वादिस्ट अचार
गर्भावस्थामा कोभिड खोप लगाएका कारण समय नपुगी वा कम तौल भएको बच्चा जन्मिने सम्भावना हुन्छ?